TTSweet: Aunty Sweet and first retired feeling
Today I wake up so early about5AM. Couldn't sleep well. I havealot of things to do today. To go to Jurong Point, IMM, 52 street wet market, Vivo city, Golden mile and so on. I plan to go to 52 st market first. Wet markets are open earlier than super market. When I have finished shower, Ju Ju is still in the bed. I decided to go alone. I waited for for the bus about 10 mins at the bus-stop.
When the bus came, it was crowded, but fortunately I gotaseat. One of the ladies, with silver lining - grey hair was standing in front of me. I felt like I want to offer my seat to her. At the same time, I didn't want her to feel that she was too old to give up the seat for her. Finally, I decided to continue sitting. When I looked around, most of the ladies are old, they all are so call senior citizen. One of the ladies wears colourful T-shirt, one was SMS-ing, one Malay lady with sarong was sleeping. By seeing them, I feelabit bored and sad. I miss my life in office,acapable woman with fresh mind. I feel myself, they are old, I am still young and I am still active, I have still youthful face. I even try to be fast my action in front of them to show off I am still young and active, unlike them. A bit funny, ha ha! like Mr. Bean. Really, I am very bad.
After I went around and around 52 street market, I couldn't findathing what I wanted to buy and decided to go back home. The weather is very hot like Yangon near Thin Gyan time and I was soaked with sweat. Singapore humidity is very high, easy to sweat when we move fast. My hair was stick with sweat. Before going to the bus stop, I passed by one of clothes retail shop. I sawabig mirror in front of the shop. When I passed there, I accidentally saw my image in the mirror and, ... I realized that Ar La Mah! I am not much different with those old ladies whom I saw in the bus. This may be my first feeling on depression of old age upon early retirement.
Posted by T T Sweet at 12:17 PM
T sweet, it isadream of all to retire as early as possible.
" Time for working others is now for mine ".
Really envy you, T sweet. I believe u do so too.
But accept the real fact that u canbthose 1 on bus in future.
May u now enjoy preparing in present and for that future too.
ပွင့်မြုးဇင် April 12, 2011 at 2:29 PM
Don't be depressed by age my dear sis. You are still young and looks younger than your current age too. Somemore, you are lucky enough to spend most of your time to be with your beloved only daughter. I wish I could copy your life when i'm at your age. Cheers!!!
T T Sweet April 12, 2011 at 3:14 PM
Thanks for encouragement guys. Now I am Vivo city waiting Ju Ju and her Aunty going to buy food.
I means people never satisfy themselves, eventhough they choose themselves those life.
TTSweetကလဲ ဘာမလုပ်ပဲနေရတာ ပိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျား။ အိမ်ရှင်မစစ်စစ်ပဲလုပ်ပါ။ ပိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ :))
You are not old enough butayouthful and capable lady yet. I don't think you've been retired already. You just takeabreak to continueabetter life. I believe you'll commence your wonderful life journey with an exciting challenge as you planned.
An Asian Tour Operator April 12, 2011 at 4:14 PM
I totally agree with Alinn :-)
ဖိုးတုတ် April 12, 2011 at 4:57 PM
ဖိုးတုတ် April 12, 2011 at 4:59 PM
ကိုယ်လဲ အလုပ်ထွက်ဖူးလို. ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ၊
ကျွန်တော်လည်း ၂ နှစ်ကြာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ဖူးတယ် ၊ အိမ်ဖော် အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်က ဆေးစစ်လိုက်တော့ တီဘီသံသယရှိနေတဲ့အချိန် ၊ ကိုယ်လဲအလုပ်ရှင်နဲ. အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မို. အလုပ်ထွက်ဖြစ်လိုက်တယ် ၊ အိမ်မှာနေရင် နေ.လည်ပိုင်းမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ ၊ အိပ်လို.လဲမရပါ ၊ အဲဒီတုန်းက အိမ်မှာ ကေဘယ်လ်မရှိတော့ နေ.လည်တီဗွီအစီအစဉ်ကလည်း မကောင်းပါ ၊ မဆွိက မှတော်သေးတယ် ၊ ယောကျာင်္းဖြစ်သူ အလုပ်မရှိရင် အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ အကြည့်ကလဲတစ်မျိုးဗျ၊ အလုပ်ချိန်မှာ အိမ်အပြင်ထွက်လိုက်လို. အိမ်နီးချင်းတွေနဲ. ဓါတ်လှေကားနဲ. ၀ရန်တာမှာတွေ.မိလိုက်ရင် သိပ်သိသာတယ်၊ သိပ်တော့လည်း မစဉ်းစားပါနဲ. ၊ ဘ၀တိုတိုလေးထဲမှာ ပျော်ပျော်နေဖို.ပဲ စိတ်ကူးပါဗျာ ၊ မိသားစုအတွက်ဆိုပြီး တွေးလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့ ပျော်ရွှင်မလားလို.ပါ ၊
ခုချိန်မှာ အလုပ်ထဲမှာ သိပ်ပျော်လို.တော့မဟုတ်ပါ ၊ မကြာသေးမီကလဲ အလုပ်ထွက်ချင်နေသေးတယ် ၊ မိန်းမကအလုပ်လုပ်လို. နည်းနည်း တော်သေးတယ် ၊ ကျွန်တော့်ဘ၀က Primary ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ကို အမေလုပ်သူက တုတ်ပြကြိမ်းမောင်းပြီး ကျောင်းမတက်ချင်တဲ့ကလေးကို ကျောင်းကိုအတင်းသွားခိုင်းသလို ဖြစ်နေပါတယ် ၊ ကျွန်တော်လည်း မိန်းမက သားရဲ့ ကျူရှင် ၊ အသုံးစရိတ်တွေ အကုန်အကျများတယ် ၊ အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မယ် ၊ ပိုက်ဆံလိုတယ် ၊ ဘလာဘလာ ဆိုလို. အလုပ်လုပ်ခိုင်းလို. အလုပ်သွားနေရပါကြောင်း ၊
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလုပ်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်နည်းသွားပါတယ် ၊ အကြောင်းကတော့ မနက်တိုင်း သားကိုလာကြိုတဲ့ကျောင်းကားကို အိမ်နားကဘစ်ကားမှတ်တိုင်မှာသွားစောင့်ရတယ် ၊ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်မနှံတဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကို ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ မနက်တိုင်း တွေ.ပါတယ် ၊ ညီမဖြစ်သူက သူမရဲ့အကိုဖြစ်သူကိုအောက်လိုက်ပို.တာပါ ၊ မနက်ပိုင်းမှာ ပစ်ကပ်ကားတစ်စီးက သားရဲ့ ကျောင်းကားနဲ. မရှေးမနှောင်း အဲ့ဒီလူကို လာကြိုတယ်၊ သူတို.နှစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို.နဲ. အမြဲနုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် ၊ အကိုဖြစ်သူက အသက် ၅၀ ကျော်က ဈေးတို.ဘာတို.မှာ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ပုံပေါ်တယ် ၊ ကျွန်တော်ကအဲဒီ့ စိတ်မနှံတဲ့ အသက်ကြီးတဲ့သူကို ကြည့်ပြီး ငါအသက် ၄၀ကျော်က ဘာလို.အလုပ် မလုပ်နိုင်ရမှာလည်းဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားတင်းပြီး အလုပ်သွားနေမိ ပါတယ် ၊ အဲ့ဒီ့လူက ကျွန်တော့်အတွက် inspire ဖြစ်မိပါတယ် ၊
ပျင်းတဲ့အချိန် စိတ်အားငယ်တဲ့ အချိန်များမှာ ခင်မောင်တိုးရဲ့ ခွန်အားဖြည့် မိငယ်သီချင်းကိုနားထောင်ပါ ၊ အိမ်ရောက်မှ ကွန်မန်.ရေးမလို. ပို.စ်က အရမ်းဆွဲဆောင်နေတာနဲ. အလုပ်ပါးချိန်လေးမှာ ရုံးက PC နဲ. ခိုးရေးလိုက်တယ် ၊ ခွိခွိ .... GOOD EMPLOYEE OF THE YEAR 2011 ....
sonata-cantata April 13, 2011 at 12:51 AM
ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲ တီဆွိကို ပြောချင်ပါတော့တယ်
ရင်မှာခံစား...(ဖြူဖြူကျော်သိန်း အသံဖြင့် ဖတ်ပါ) ဝေဒနာတွေ တီဆွိ ရေးပေးလို့ပါ...:)
ကိုဧရာက old modern lady တဲ့...းP
bear April 13, 2011 at 6:39 AM
Hope you'll be lucky in the furture with your family :P
မယ့်ကိုး April 13, 2011 at 9:46 AM
Ma Ma , you arealovely lady :) please take note this period as long vacation :). I wish you haveaawesome vacation .please take care , Ma Ma :)
2nd line= wet markets are open (NOT opened, it's not passive voice)
3rd line= I waited for the bus about 10 min ( waited for +something/someone+ time)
4th line= I gotaseat ( " to sit" is unnecessary, you already mentioned you're on the bus)
* One of the ladies (NOT " one of the lady") .....( One of + plural form) with gray hair
( lining is not required)
5th line= I felt like I wanted to offer my seat to her. (more appropriate writing)
5th line= I didn't want her to feel that she was too old.......( NOT " is", you wrote in the past tense)
6th line= decided to continue sitting ( continue + Verb-ing)
6th line= so called (NOT " so call") and you should know " so called" is sometimes used as bad taste in English. (အဲဒီလို ခေါ်ကြတာပဲလေ..မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောသည့် အသုံးအနှုန်း)
They all are called senior citizens. (correct form)
T T Sweet April 14, 2011 at 7:38 PM
Ha Ha , this Anonymous pointed out my mistakes. I admit my English skill is not good. I cannot write in Myanmar in the bus.
6th line= One of the ladies wears....(One of + plural form+ Verb in singular form)
7th line= I feelabit bored (NOT " bore") (bored is Adj)
8th line= wrong phrases
They are old but I feel myself I'm still young, active and haveayouthful face.
(you should not used " still" for3times, It's called redundency in grammar)
9th line= I am still young, unlike them (more appropriate)
10th line= The weather is very hot ( " The" is required)
11th line= I was soaked with sweat (more appropriate)
13th line= I am not different...( NOT " I am no different")
အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဘတ်စ်ပေါ်ကနေ အလွယ်ရေးတာမို့ အမှားတွေပါတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စလုံးတွေလို အင်္ဂလိပ်စာကို အတို၊ အလွယ်တွေ၊ ဂရန်မာ အမှားတွေနဲ့ မရေးစေချင်ပါ။ မနေနိုင်လို့ အားနေလို့ ပြင်ကြည့်တာပါ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ အမရေ။
T T Sweet April 14, 2011 at 7:48 PM
ပြင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်မဆိုးပါဘူးဂျာ။ ဒီမှာတော့ Singlish အကျင့်ပါနေတာကြာပြီ။ ဒါတောင် အထပ်ထပ်ပြင်ထားသေးတာ။
Anonymous May 21, 2011 at 11:31 PM
8th line correction =(you should not used " still" for3times, It's called redundency in grammar)
you should use (should + verb base form)?
redundancy instead of redundency?
Don't be angry with me as I am too lazy to do my homework.